कोरियन भाषा परिक्षा पास भएका र पढ्दै गरेकाहरुको भविष्य अब के हुन्छ ? कस्तो छ कोरिया जाने सम्भावना ? (भिडियो हेर्नुस्) – Khabar 27 Media
April 27, 2021 Shyam LamaLeaveaComment on कोरियन भाषा परिक्षा पास भएका र पढ्दै गरेकाहरुको भविष्य अब के हुन्छ ? कस्तो छ कोरिया जाने सम्भावना ? (भिडियो हेर्नुस्)
काठमाडौ । कोरियन भाषा परिक्षा पास गरेर कामको पनि टुंगो लागीसकेका करिब ५ हजार नागरिक कोरिया जान नपाएर बसेका छन् । भाषा परिक्षा पास गरेर कोरियाको कम्पनीमा श्रमको लागि सम्झौता समेत भएर टिकट समेत लिएकाहरु जान पाएका छैनन् । यस्तो अवस्थाका नागरिकहरुको भविष्य अब के हुन्छ ? कोरियन भाषा प्रशिक्षक हुन् यिनी ।
मंगलबारको दिन किन गर्ने भगवान श्रीगणेशको पूजा ? यस्ताे छ धार्मीक मान्यता
जेरीको दोहोरीमा करोडौको लगानी दुबेपछि तनाबमा,बन्द गर्ने तयारीमा,भाबुक हुदै आए श्रीमान सहित मिडियामा(भिडियोसहित)
June 3, 2021 June 3, 2021 Shyam Lama
March 7, 2021 March 7, 2021 Shyam Lama
September 23, 2021 Shyam Lama